Somaliland: Boqortooyadii Riyada? Faallo: cabdi casiis Bashiir Nuur
Somaliland: Boqortooyadii Riyada? Faallo: cabdi casiis Bashiir Nuur 0 July 31, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 614
Somaliland: Boqortooyadii Riyada?
Faallo: cabdi casiis Bashiir Nuur
Faallo: cabdi casiis Bashiir Nuur Somaliland:
Faallo: cabdi casiis Bashiir Nuur Tan iyo axadii Tobaadkan
Markii Madaxweyne siilaanyo iyo Kolonyo uu hoggaaminaayo, booqosho ugu ambabaxeen
Gobollada Bari ee Somalialnd Togdheer, Sool io sanaag, waxa Xafiiska
af-hayeenka Madaxtooyadda u Warbaahinta usoo dirayey wararka iyo Warbixinaha
Safarka, arrintaas oo sharciyan marka loo eego, shaqadiisi ah. Hase-yeeshe waxa la yaab
leh, warar is-daba jooga ah ee Xafiiskaasi warbaahinta kusoo qar-qiyey, Waxa
%80 ay ahaayeen kuwo ka warbixinaaya dhaq-dhaqaaqa Marwada koobaad ee
Madaxweynaha gaar ahaan, kaalmooyinka ay u fidisay dad dan yar ah, agoomo, Cisbitaaladda,
saldhigyada iyo jeelasha, waxa kale, oo intaa weheliyaa goobo iyo Xaruumo kale,
oo ay si gaar ah uu booqoatay. Geesta kale, xafiiska
af-hayeenka madaxtooyadda oo shaqadiisu tahay inuu Wabaahinta xidhiidhiyo
Madaxweynaha intii safarka Madaxweynuhu ku jiray in ka yar %10 waxa ay ka hadlaayeen, dhaq-dhaqaaqa
Madaxweynah, halka sida aynu kor kusoo sheegnay %80 ay khaas uu ahaayeen
dhaq-dhaqaaqa iyo Booqoshada Marwada.
Tusaale ahaan, intii
waftigu ku sugnaa Gobolka Togdheer waxa xafiisku soo diray, laba warbixinood oo
ku saab-san Booqasho Marwadu ku tagtay Xaruunta
agoomaha,iyo ta akale oo ahayd kormeer marwadu ku tagtay Cisbitaalka iyo Jeelka
goobahaas oo marwadu ugu deeqday Xoolo Nool iyo gaadhi Bas ah oo ay ballaan
qaaday. Dhanka kale, waxa waftiguu halkaa uga sii gudbay Gobolka sool, halkaas
oo xafiiska af-hayeenku warbaahinta uga soo tabiyey laba warbixinood oo mid ku
saabsanayd Booqashada Madaxweyneha ee Ciidamada jiida hore iyo ta labaad oo
ahayd oo ku saabsaneyd deeqo Marwada Madaxweynuhu gudoon-siisay Xarunta
Masuuliyiinta Xarunta, agoomaha Cisbitaalka Guud iyo Jeelka dhexe ee Magaaladda
Laascaanood. Marka laga yimaado Gobolada ku teet-san Laamiga waxa waftiga
Madaxweynuhu uu gudbay dhinaca Goboladda Saraar iyo Sanaag jiidahaas oo
warbixinaha Xafiiska af-hayeenku ka soo diray, ay ahaayeen iyana Laba
Warbixinood, kuwaas oo kala ahaa mid ku saabsaneyd Deeq xoolaha, oo dadka
deegaanku ugu tallo galay dhis-maha wadaada Ceerigaabo iyo tallabaad oo ahayd
Deeq Dhar oo Maawadu u fidisay Haweenka Reer Ceel-af-weyn.
Hadaba, waxa is-weydiintu tahay
ma Madaxtinimadii Somaliland ayaa noqotay Boqortooyo, oo sidaas darteed ayey
Marwadu ku dhaxashay talladii dalka, mise waxa run ah dhaliilihii Asxaabta iyo
Siyaasiyiinta Mucaaridka ah, ee sheegayey in aan Tallaada dalku Gacanta ugu
jirin Madaxweynaha iyo in Marwadu dalka ka Taliso ?.
Sidaa darteed marka la eego,
tal-ceelinaha dhinaca warar iyo Wabixinnaha Safarka Madaxweynaha waxa markhaati
ma doon ah in dalka Marwadu ka taliso!!! Waxa’se su’aali ka taagan-tahay sida
xaalka Madaxweynuhu yahay?
Qore Cabdi casiis Bashiir Nuur
info@xogreebnews.com Hargeysa/somaliland No Comments yet... Print